Bayanda, gynecologists uxilongwe kwabesifazane lesizalo endometrium. Nokho, kuyini, akubona bonke uyazi. Endometritis - ukuvuvukala ulwelwesi lwamafinyila we umzimba. Esimeni lapho ngaleyo ndlela ayigcinanga kanye ungqimba imisipha, lapho metroendometritis. Nge iphuzu prognostic umbono, ukhetho lwesibili zimbi kakhulu ukuze isiguli. Ukuze aqonde ukuthi yini umehluko phakathi izifo baphendukela anatomy.
Umzimba siqukethe umzimba, wesibeletho kanye fallopian amashubhu. Ngakwelinye ihlangothi, umzimba kufaka endometrium (ulwelwesi lwamafinyila, ayenqaba okuyinto izimbangela ukopha esesikhathini), myometrium (ungqimba kwemisipha, okuyinto ngesikhathi sokukhulelwa sisalokhu, ukuvumela umzimba ukwandisa izikhathi eziyishumi) kanye ipherimitha (serous, noma yangaphandle, igobolondo, okuyinto amashidi ukuqhubeka peritoneum).
Nakuba myometrium futhi endometrium ungakwazi ukuhlukanisa kokubili histologically futhi zibukeke, kukhona ukuhlobana esondelene kakhulu phakathi kwazo, ngakho-ke, kuvuke omunye amagobolondo yenqubo sokugembula, ngokuvamile, ngokushesha ithumba yesibili. I endometrium yakhiwa ungqimba obusebenzayo, uyaxebuka ekupheleni kokuya esikhathini, futhi basal, kubangela ukwakheka ungqimba olusha futhi kanjalo nesenzakalo we kokuya esikhathini entsha. Amaseli ungqimba obusebenzayo zifane amasilinda, ngakho abizwa ngokuthi epithelium columnar. Phakathi kwabo kukhona akhiqizwa the isikhwehlela kudingekile amaseli indlala, futhi amagatsha ukuphela Kuvunguza imithambo. isakhiwo njalo is ngempela ethambile futhi kalula ukungenwa imiphumela emibi. Noma yimuphi umonakalo igcwele ukuthuthukiswa ukutheleleka nokuvuvukala. Le nqubo iyona endometrium lesizalo. Kuyini manje, sithemba, kuyacaca. Futhi njengoba zonke zamatshe umzimba kuhlobene nomunye futhi phakathi kwabo azikho izithiyo ukuphepha, endometritis ngokushesha agelezela metroendometritis. Ngokulandelayo, ake sixoxe etiology lesi sifo.
kakade Sithe inqubo sokugembula kuwumphumela ukulimala ulwelwesi lwamafinyila kwesibeletho. Kodwa elula ukulimala kungaholela ezinkulu nemiphumela. Kuphela ngaphansi kwezimo bangangenwa yilesi sifo ongaphakeme, ukungahlanzeki ezibhedlela, khona isifo ongaphakeme-ebangeni kungase nomdlavuza endometrial. Kuyini, awazi abesifazane mathupha eziningi ukubeletha, ngoba kwangemva kokubeletha ukuvuvukala ulwelwesi kwesibeletho kuvamile. Izizathu zalokhu lalala kabusha enkulu omzimba abesifazane. Kwezinye izimo, umonakalo avame kwenzeka ngenxa:
nokususa le lesizalo ingaphakathi (Oncology okusolakala, ukopha, isisu wezokwelapha);
Bebona ingaphakathi lesizalo;
hysteroscopy (endoscopic luhlolo kwesibeletho);
hysterosalpingography (Ukutadisha amashubhu fallopian kanye kwesibeletho ekwelapheni ukungabi nenzalo);
Ukuvuvukala wumumo polyethiological, ukuthi eyenziwe iqembu Amagciwane, omunye okungase yibona. Izimpawu endometritis e abesifazane kuvela uma ulwelwesi ezilimele kwesibeletho zingene streptococci, Klebsiella, Mycoplasma, E. coli, Enterobacter, chlamydia, isifo sofuba mycobacteria, Proteus, idiphtheria imbewu eletha, lenyama noma ama-virus. Uma ungenalo ukuxilonga noma aphathe zokugula ngesikhathi ke singenele, inqubo ingathatha bubé.
Izimpawu lesizalo endometritis
Lesi sifo ekuqaleni wabonakaliswa ukwanda lokushisa ukuze 38-39 degrees, serous-ubovu, serous, khulula olunegazi-ubovu kusukela umthondo, ubuhlungu esiswini, endaweni sacrum okubhekiselwe, ukucobeka jikelele. Kulesi simo, kunethemba lokuthi zonke kuzodlula ngawodwana, can akazibekanga medicate. Ngemva endometrium lesizalo - kuyini? Lokhu nokuvuvukala, futhi yimuphi ukuvuvukala kungaba asabalala abe kude endaweni lapho okuzobhekwa zisuka nje. Ngakho-ke, uhlehlise Ukuvakashela udokotela nakanjani kuyoholela usongo yezinkinga ezinzima ukonakala, okuyinto baye baphathwa esibhedlela, futhi umphumela kungenzeka ukunqunywa kwesibeletho, noma okubi nakakhulu - sepsis, ukuthi ngokuvamile igcwele kuholele ekufeni. Yingakho izimpawu endometritis e abesifazane akunakugwenywa.
Esimeni lapho angahlangani kwenzeka onesifo, ubonisa ezinye esilufifi. Izici sici: imfiva nehlala njalo, uma ukuya esikhathini kungaqondi, ukopha intermenstrual, ubuhlungu ngesikhathi wamathumbu ukunyakaza, osenyameni evela umthondo, nemvelo ngokuvamile Putrid. Okungalapheki umdlavuza endometrial akuvimbeli ebamba isisu uma kukhona ukukhiqizwa kwamaqanda. Kodwa uma kuhambisana iziyaluyalu ezikhiqiza amaqanda noma ezinye kwezinso zangasese, zokuzala umsebenzi abanaso bangabhekana zenzeka, okuholela izisu okuvele nenzalo.
Okokuqala, udokotela ehlola ngokuningiliziwe umlando, ngoba kakade ngesisekelo izimpawu angaphakamisa khona ukuvuvukala ulwelwesi kwesibeletho e isiguli. Futhi, udokotela wezifo zabesifazane nakanjani uhlola ngezibuko nezingodo ze palpation isitho abathintekayo. Lapho obonakele kwesibeletho ngokuvamile ngo usayizi, kukhona ubuhlungu lapho wathinta. Udokotela ihlola ubunjalo ukudedelwa: iphunga, umbala, ubungako, ukungaguquguquki.
Isekelwe kuphela umlando kanye nemiphumela sokuhlolwa, akunakwenzeka ukuba nithole endometritis. Ukuxilonga baqhubeka zocwaningo laboratory. Wabesifazane ukuthatha smear ukusungula ngokunembile khona yingozi amagciwane kanye seeding impahla, ukuvumela ukuba uhlole ngokuningiliziwe pathogen ngu ezikhulayo kuyo isiko naphakathi akhethekile ukunquma degree yayo ephendula izidakamizwa ethile. Ngaphezu ukuthi kwenziwe ngegazi kwamakhemikhali futhi emtholampilo ihlaziya, esekelwe okuyinto, njengoba umthetho, kungenzeka ukuqinisekisa ngokunembile ukuxilongwa kakade (egazini itholwa shift kwesokunxele leukocyte, yashesha erythrocyte sedimentation rate).
Uma kungenzeka, udokotela kwenza ngaphezulu kanye ultrasound kwesibeletho. Uma, ngesikhathi luhlolo ultrasound uzobe ukuqina mucosa, ubomvu kanye amahlule wembula (kukhombisa kwenzeka lapho zokugula luyindida futhi Hematometra pions), ushintsho echogenicity izicubu we myometrium, izinsalela izicubu esinomhlapho, kungenzeka ukukhuluma ngokuzethemba mayelana endometrium. Ukuvuvukala ivame ezikhiqiza amaqanda futhi amashubhu fallopian, okuyilona elisebenzayo futhi sibonakala kalula ngaphansi ultrasound. Endabeni endometritis okungamahlalakhona kungase, phakathi kwezinye izinto, thola spikes kule ingaphakathi lesizalo. Ngokuvamile, sitholakele lesi sifo, okuyinto has a Yiqiniso okungamahlalakhona, kungabangela ubunzima, ngoba kulesi simo izimpawu ezifana nalezo ezenzeka ezinye izifo eziningi zesifazane uhlelo zokuzala. Indlela ngalesi sithombe kuyoba ngendlela engaguquguquki futhi eqhubekayo ukuvuvukala ukuhlwanyelwa evilaphayo, izilokazane ezincane efanayo.
Uma zokugula itholwa ngendlela efanele usaqala, kungenzeka ukuphathwa kohlelo sinenkonzo yokunakekela iziguli emakhaya. Njengoba wazi, ukuvuvukala zesifazane izitho zangasese study legatsha imithi efana zabesifazane. Endometritis - azihlukile ngakho, simise futhi beqondisa ukwelashwa kufanele kube udokotela wezifo zabesifazane. Ngokuvamile, esimweni ekuhlonzweni yokwelapha siqukethe ethola ejenti antipyretic futhi elwa namagciwane. Kodwa, ngeshwa, iningi abesifazane abaphendukela onguchwepheshe ne ukubambezeleka, eliphumela isidingo esibhedlela, ngoba ikhambi i-endometriosis esigulini esingalalisiwe esibhedlela kuleli cala engasakwazi. Udokotela ehlola ngokuningiliziwe ngezimo zesiguli, degree of ukuvuvukala izehlakalo, nezimbangela zayo futhi kuphela ke ukhethe izinyathelo zokwelapha.
Ngokuvamile, kuqala ukuqhuba yokwelapha wezokwelapha. Imithi elwa namagciwane Kunconywa lapho endometritis iqondiswa ngemithambo yegazi. Ngokuvamile esetshenziswa cephalosporins (izidakamizwa "Tsedeks", "ceftriaxone", "Tseftrazidim") lihambisana metronidazole (imithi "Metragil"). Intramuscularly iqondiswa izidakamizwa "gentamicin." Ukwelashwa Kwenziwa izinsuku emihlanu kuya kweyishumi.
Uma umgodi lesizalo atholakala izinsalela placenta ngemuva kokubeletha noma Ukubeletha, ingxenye umbungu esimweni i akuphelele isisu, emva ufeza ukumnika yokwelapha ngemithi elwa namagciwane ukwenza nokususa. immunomodulators Ngemva kwalokho wasebenzisa, ukwelashwa Vitamin, ukubhucunga nokunyakazisa umzimba.
Kulesi simo, ukwelashwa kufanele kube okuhloswe ngalo ukuqeda ethize lwegciwane. ukwelashwa uhlelo kuyakhethwa ngemva uzingela ubunjalo lesi silwanyana. Imithi elwa namagciwane ngoba ezingamahlalakhona endometritis imisinga esetshenziswa ziyefana esimweni ukuvuvukala oyingozi. Kodwa uma kutholakala ukuthi lesi sifo futhi ibangelwa igciwane (isib, herpes), kuyoba aphoyintimenti ejenti elwa namagciwane ukuthi ukwandisa umsebenzi wamasosha omzimba (wayevame ukusebenzisa izidakamizwa, immunomodulators "Viferon", "interferon" nokunye okunjalo). Indlela esiphatha ngayo ezingamahlalakhona umdlavuza endometrial, udokotela esimweni ngasinye isinqumo ngokwehlukile. Uma umonakalo omkhulu ungaboniswa esasikhipha imithi ngqo le mucosa umzimba ukunikeza emakamu esiphezulu yezidakamizwa ukuvuvukala.
Ngaphezu kwalokho okudingekayo ukuvuvukala kuhlinzwa ngokwahlukana kwenziwa (mhlawumbe wenze hysteroscopy). Abesifazane abangena kamuva ufisa abe enqunyiwe yokwelapha i-hormone abakhulelwe (ngokuvamile izinto zokuvimbela inzalo temlomo). Lapho isigaba okubi kakhulu iphelile futhi isimo lesiguli ehluleka ekulinganiseni, ukuqhuba elashwe ngokomzimba, kuhlanganise ephansi umfutho ukwelashwa UHF (ultrahigh-imvamisa imiphumela emzimbeni ensimini kagesi, wavelength - 1-10 ngamamitha) kanye ngezansi-bomvu ukwelashwa laser. Ngenxa lezi zinyathelo ingafinyelela amanzi ngcono ubomvu kanye uketshezi ukuthi ayesezibekelele ngalo ingaphakathi lesizalo, kanjalo nokuqinisa mestnoreparativnye umsebenzi.
kwangemva kokubeletha endometritis
Lena inkinga engathi sína inqubo kwangemva kokubeletha kwenzeka ngokuvamile lokho kwanele. Kuyinto oyingozi futhi ngokuvamile ekuqaleni izenze wazizwa. Ukuvuvukala kwenzeka uma kwesibeletho emva kokubeletha kuba izicubu esinomhlapho noma engahlonishwa nezindinganiso zempilo. Sizokwenza ukukhuluma indlela yokuphatha lesizalo endometrium kuleli cala.
Kuleso sibhedlela olwenziwa yokwelapha okukhulu elwa namagciwane, futhi lapho inqubo kulinganiselwe wanqamuka, kusukela ngalo ingaphakathi lesizalo ususe wonke izinsalela placenta. Ngezinye izikhathi kukhona izinkinga eziholela sepsis, edinga ukuhlinzwa. Ngesikhathi ekwelapheni abesifazane, nabancelisayo kufanele ayeke ibele. Ngisho kwadlula isikhathi esithile ngemva kokuphela yokwelapha, isiguli kumele lithathwe ngudokotela. Ngaphansi kokuqondisa physiotherapist bangakwazi ukunikeza izinqubo yokutakula: hydrogen sulfide Radon, emoyeni nokugeza.
Imicimbi ingakha kakhulu ezimbi indlela, lapho lesi sifo sisabalala ngegazi, i-lymph, fallopian amashubhu, wesibeletho, esithweni sangasese somuntu wesifazane. Kulokhu, kukhona ubuthi igazi - sepsis. Okunye ukuxakeka kungenzeka - kumiswa pyometra (ekuqongeleleni ubomvu esibelethweni ngenxa occlusion), oophoritis futhi salpingitis, ukuvuvukala kwezitho zangasese (eba uma ubomvu singena ingaphakathi okhalo). Ngezinye ukwelashwa akwenele noma kube nezinkinga ngasekupheleni singenzeka: ukuhlukumeza komjikelezo, uqinile ubuhlungu besisu, ukungazali. Uhlu akugcini nemiphumela ebuhlungu, siye ohlwini nezinkinga ezivamile kuphela, eqinisweni, kunabaningi.
umdlavuza endometrial: ekwelapheni amakhambi abantu
Sonke siyazi ukuthi ukusetshenziswa imithi zokupheka anganikeza imiphumela emihle izifo eziningi. Kodwa hhayi esimweni endometritis! Lokhu ezinzima ukuvuvukala, kodwa liguqubele kakhulu okubi nemiphumela. Phatha kumele Ochwepheshe kuphela - gynecologists oqeqeshiwe. Endometritis phakathi nekhulu th 17-19 kwaba lohlupho zonke izibhedlela womama, wabizwa ngokuthi "umkhuhlane childbed". Lesi sifo njalo agelezé e metroendometritis ke - ku sepsis, ngenxa omama abasanda babulawa ngobuningi. Manje odokotela unolwazi kusho ukushabalalisa ukushisa ngaphandle nemiphumela. Kodwa nge self-nokucwaninga may ekupheleni kakhulu kabi. Khumbula lokhu!
Ukuvimbela endometritis, kubalulekile ukuba aqede zonke izici ukuthi kubenza bavame ukuba yayo ukuthuthukiswa. Ukwelashwa kusenesikhathi izinkinga ezivukayo ngesikhathi sokubeletha, izifo ezidluliselwa ngobulili ngokuthintana ngocansi, bazilahla isisu - lena izindlela ezifanele kakhulu futhi ngempumelelo ukuze avimbele izifo sokuvuvukala endometrium. Kusho prophylaxis non-ethize bangase benze ezifana kokuthola imithi immunomodulatory, ekuseni ibele ingane. Ngemva kokuzalwa, owesifazane kufanele ngempela ifanele ihlolwe, okumele ukwenze ultrasound futhi ukuhlolwa kwezitho zangasese sidlule. ongakhetha Prevention ziningi, kodwa esibaluleke kakhulu - ukunakekela impilo yabo, kanye nokufinyelela esifike uchwepheshe ofanelekayo uma ithola noma iziphi izimpawu eziyisixwayiso. Hlala uphilile!
Tampons uju e zabesifazane: ukubuyekezwa. Tampons ne Aloe nezinyosi zabesifazane, swabs nge onion kanye noju zabesifazane: ukubuyekezwa. Indlela tampons uju e zabesifazane?